नेपालमा आएर केहिदिन बिताएका अनुपम खेरले किन नेपालको बारेमा यस्तो लेखे ? – Online Khabar 24
काठमाडौं – गत ४ अक्टोबरदेखि नेपालमा भारतीय फिल्म ‘उँचाइ’ को छायांकन भइरहेको थियो ।
फिल्म युनिटले सेप्टेम्बर २८ मा पहिलो सेड्युल सकाएको छ । पहिलो सेड्युल अन्तर्गत दुई दिन काठमाडौं र बाँकी समय नेपालको हिमाली जिल्लामा छायांकन गरिएको हो । गत बिहीबार नेपाल सेड्युल ‘इन्ड क्ल्याप’ गरेको फिल्मका मुख्य कलाकारहरू अनुपम खेर, परिणिती चोपडा, बोमन इरानी भारत फर्किसकेका छन् ।
हिमाली भेगतर्फ लुक्ला र नाम्चेको सुन्दरता कैद गरेपछि फिल्मका कलाकार अनुपमले नेपालको सुन्दरताको प्रशंसा गरेका छन् ।
फिल्मका लागि नेपालका प्रोडक्सन म्यानेजर अरुण रेग्मीले ‘उँचाइ’ पछि अन्य भारतीय फिल्म पनि छायांकनका लागि आउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘उहाँहरू नेपालको सुन्दरता देखेर मोहित हुनु भएको छ । आस छ, यसको चर्चा बलिउडमा हुनेछ,’ अरुणले भने । यो खबर साभार गरियको हो ।
Prevसम्बन्ध विच्छेद गरी छुट्टै बसेकी श्रीमतीले श्रीमानलाइ मध्यरातमा फोन गर्दै भनिन्, ‘ए.. हजुर ! प्रेसरको दबाइ लिइरहनुभएको छ नि ?’
nextटिकटकमा भाईरल लाईभ दोहोरी ‘चोली मैल्यै भो’ गाउने सानी गायिका पुजा देवकोटा मिडियामा (भिडियो हेर्नुस)